Wasaaradda Arrimaha Debbada Shiinaha oo qaabishay Saxafiyiin uu hogaaminayo agaasimaha Guud ee Wasaarada Warfaafinta( Sawiro) – Radio Muqdisho
Wasaaradda Arrimaha Debbada Shiinaha oo qaabishay Saxafiyiin uu hogaaminayo agaasimaha Guud ee Wasaarada Warfaafinta( Sawiro)
Weriyeyaal ka kala socda Warbaahita Dawladda Soomaaliya iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo uu hogaaminayo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Dawlada Soomaaliya, Cabdiraxman Yuusuf Sheekh ‘Cadaala’ ayaa maanta oo Jimco ah booqday Wasaaradda Arrimaha Debbadda Dawlada Shiinaha caasimadda dalkan ee Beijin.
Mas’uuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Debbadda Shiinaha Waaxdeeda Arrimaha Africa ayaa si diiran uga soo dhoweeyey Saxafiyiinta iyo Agaasimaha Xarunta Wasaarada, waxaana ay yeeshay kullan ku saabsanaa kaalinta Shiinaha ee Africa, si gaar ah Saaxiibtinimada soo jiraanka ah ee Soomaaliya iyo Shiinaha, dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, Amniga iyo taageerada Shiinaha ee dhanka Mashaariicyada iyo Beni’aadinimo.
Kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Debbadda Waaxdeeda Africa, Hu Zhang Lian ayaa sheegay in xiriirka iyo Iskaashiga taariikhiga ee ay la leeyihiin Soomaaliya ay xoojinayaan, waxaana uu sheegay in Xiriirka Diplomasi ee labada dal uu bilowday 1960-kii, welina waxba iska bedelin.
“Waan ku faraxsanahay la kulankaaga Agaasime, adiga iyo Wafdigaaga Weriyayaasha ah ee ka socda Soomaaliya, Waa dal saaxiibtinimo fog naga dhaxaysa oo ixtiraam weyn u hayno, mashaariicyo badan oo muhiim ah baan beri samaadkii ka fulinay, waxaana ka mid ah Cusbitaal, waddooyin,Warshad Sokor, Xarunta Murtida iyo Madadaalada iyo iyo Garoonka Kubbadda Cagta Muqdisho”, Liang ayaa sidaa yiri.
Mr. Liang ayaa xusay in hadda ay Soomaaliya ka saacidaan dhinaca Amniga oo ay taageeraan Hawl-galka Midowga Africa, Dhinacyada Beni’aadanimada, Waxbarashada, ayna safaarad ku leeyihiin Soomaaliya.
“ Weerarkii Argagixiso ee ka dhacay Hotel Jazeera oo noo ahaan jiray Safaarad, waxaan ku wayn mid kamida ilaalada Safaaradeena halka afar kale ay ku dhaawacmeen, nama aysan baqdin gelin bal inaan safaaradba ku yeelanay mooyee oo xoojinaynaysa xiriirka Soomaaliya aan la leenahay”, ayuu raaciyey.
Agaasime C/raxmaaan ayaan dhankiisa uga mahadceliyey dawladda Shiinaha doorkeeda Soomaaliya, si gaar ah sida diiran ee isaga iyo wafdigiisa looga soo dhaweeyey xarunta Wasaarada Arrimaha Debbada Shiinaha ee Caasimadda Shiina Beijin.
“ Aad baan uga farax-sanahay kullankan, waad ku mahadsan-tihiin sida sharafta leh ee nooga soo dhaweysay, waxaana si gaar ah ii soo jiidatay sida aad xog-ogaal ka uga tahay arrimaha Soomaaliya maanta iyo Shalayba, Waxa aad sidoo kale ku aaman-tihiin wixii wanaagsanaa ee taariikhda galay ee aad u gasheen Soomaaliya, waana khirsanahay, Waxaa idin sheegayaa in weli ay jirta fursado badan ee soo dhawaada”, Cadaala ayaa sidaa yiri.
Agaasimaha ayaa intaas ku daray in Shiinaha uu dalalka kale qaarkood uu uga duwan yahay in aanu fara-gelin ku samaynin arrimaha gudaha ee Soomaaliya.
Agaasimaha iyo Wafdigiisa ayaa sidoo kale kulan la yeeshay ku xigeenka agaasimaha Guud ee Waaxda Warfaafinta Wasaaradda Arrimaha Debadda dalka Shiinaha, Chen Toa
Weriyeyaashan ayaa ka kale socda Warbaahinta Dawladda, TV-ga CGTN-ka oo laga leeyahay Shiinaha, Radio Goobjoog, Hiiraan Online iyo Universal TV, waxaana ay caasimadda Shiinaha soo gaareen Seddexdii Bishan May(May 3, 2018) iyagoo Muqdisho ka soo baxay maalinta Arbacada oo ku taariikhda ku astaysnayd 2-dii bishan.
Waxana ay joogayaan asbuuca nasoo aadan oo waayo aragnimo shaqo ku soo qaadayaan magaaladan Beijin iyo magaalada kale ee Chonqtin ee dalkan Shiinaha.
Ra’iisul wasaarha Soomaaliya oo soo xiray Shirkii ganacsiga ee ka socday Turkiga+Sawirro
Emmerson Mananganwa oo bilaabay Ololihiisa Doorashada ee dalka Zimbabwe